Amanqaku kaSam Melnick Martech Zone |
Amanqaku ngu USam Melnick
USam Melnick yi-VP yeNtengiso e I-Allocadia, inkokeli yesoftware yoLawulo lweNtengiso, elawula ngaphezulu kwe- $ 20B kwintengiso yokuchitha ukuza kuthi ga ngoku. Ugqwesileyo ophumelele amabhaso kunye nohlalutyo oluqhutywa ngocazululo olunamava njengengcali yentengiso eVivox, umhlalutyi wecandelo leCMO kwiIDC, kunye nomphathi wempumelelo yabathengi kwiiNjini zeLattice. USam usisithethi rhoqo kwiminyhadala yokuthengisa kunye nombhali oqaqambileyo wophando lwentengiso. Wayesaziwa njengeyona teknoloji iphambili kwezentengiso ye-50, kunye nomnye wabaphembeleli abaphambili be-40 baseNew England kumxholo kunye nentengiso yedijithali. USam uphumelele kwi-UMass Amherst Isenberg School of Management.
Iimpazamo ezi-7 oya kuzenza xa usenza intengiso
NgoLwesine, Novemba 23, 2017 NgoLwesibini, Novemba 28, 2017 USam Melnick
Uhlahlo-lwabiwo mali lwe-CMO luyancipha, njengoko abathengisi besilwa nokukhula kwemali, ngokweGartner. Ngokujongwa ngakumbi kutyalo-mali lwabo kunanini na ngaphambili, ii-CMOs kufuneka ziqonde ukuba yintoni esebenzayo, yintoni engekhoyo, kunye nalapho banokuchitha khona idola yabo elandelayo ukuqhubeka nokwandisa ifuthe labo kwishishini. Ngenisa uLawulo lokuSebenza kweNtengiso (MPM). Yintoni uLawulo lweNtsebenzo yeNtengiso? I-MPM yindibaniselwano yeenkqubo, itekhnoloji, kunye nezenzo ezisetyenziswa yimibutho yentengiso ukucwangcisa imisebenzi yokuthengisa,